မြန်မာနှင့် တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှု ပြန်လည်ထူထောင်ရန် အမေရိကန် ကျောက်မျက်အသင်း ရည်ရွယ်ထား
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှု ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အမေရိကန်ကျောက်မျက်အသင်း (AGTA) ဥက္ကဋ္ဌ Mr Jeffery Bilgore နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာကျောက်မျက် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဒီကိုလာတွေ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာကဏ္ဍဟာ ကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံနှင့်မဆို တန်ဖိုးချင်းယှဉ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ကုန်စည်ကူးသန်းမှုကပဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့.
ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ကိုယ်တိုင်မျက်မြင် တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ သတင်းသမားဘဝ၊ ဝရမ်းပြေးဘဝနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ဘဝတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ် သတင်းသမားတစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဘဝဇာတ်ကြောင်း ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- တေဇလှိုင် ဈေးသူဈေးသားများလည်း ဆိုင်မဖွင့်ကြ၊ ရုံးသူရုံးသား၊ အလုပ်သမားများလည်း ရုံးမတက်ကြ၊ တောင်သူများလည်း ယာထဲမဆင်းကြ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများလည်း ကျောင်းမသွားကြ၊ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များအပြင် ဟိုပုန်း၊ ညောင်ရွှေအစရှိသည့်.
Frontier နှင့် Nyan Hlaing Lynn ရေးသားသည်။
“ရန်ကုန်၌ နိုင်ငံသားကတ်အတု ကိုင်ဆောင်ထားသူ အများအပြား ရှိနေ” – ဦးဇော်အေးမောင်
ရန်ကုန်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအတု ကိုင်ဆောင်နေထိုင်ကာ စီးပွားရေးလုပ်နေသူ အများအပြားရှိနေသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ယနေ့ ပြောကြားသည်။
မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ခါးပတ် (Seat Belt) မတပ်သော မော်တော်ယာဉ်များကို လာမည့် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ကာ ဖမ်းဆီးအရေးယူတော့မည်ဖြစ်သည်။
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အရေးယူသွားမည်
အရွယ်မရောက်သေးသည့် အိမ်အကူ မိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးအား လုပ်ခလစာမပေးဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခိုင်းစေခဲ့သည့်ပြင် နှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံးလေးဦးအား အရေးယူသွားမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်အောင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လ ျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားသည့် အာရှအခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် (Asian Infrastructure Investment Bank) က ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ပေးရန် အတည်ပြုလိုက်သည်။ ဘေကျင်းအခြေစိုက် ထိုဘဏ်က စက်တင်ဘာ.
ကရင်ပြည်နယ်၊ မဲသဝေါဒေသရှိ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည့်နေရာများမှ စစ်ဘေး တိမ်းရှောင်လာကြသူများအား နေရပ်မပြန်ကြရန် တပ်မတော်က ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တက စတင်ကာ တားမြစ်ထားသည်ဟု သိရသည်။